Budada Chromium budada, CrB2 - Goodao Technology Co., Ltd.
Caanaha molecular Crb2
Barta dhalaalida 1300C
Cufnaanta 7.63 g / cm3
Isticmaala daxalka u adkaysta, shoog kuleylka ah. Waxaa loo adeegsaday sida xirashada u adkeysata, daaweeynta qandhada heerkulka ee heerkulka iyo falcelinta nukliyeerka ee nuugista nuugista korantada korantada, unugga korantada koronto dhaliyaha
Magaca Badeecada: chromium diboride
Qaaciddada molecule ee chromium diboride: b2cr
Miisaanka molikalka: 73.62
Magaca Ingiriisiga: chromium boride (CrB2) EINECS: 234-499-3
Cufnaanta: 5.15 Ingiriis oo loo yaqaan: chromium diboride; monochromium diboride
Bar dhibic: barta dhalaalida: 1550oc
Waxaa loo isticmaalaa soosaarida hawo koronto kuleyl badan leh iyo dhoobada dhoobada.
Chromium diboride (CRB_ 2) Dahaadhku wuxuu leeyahay barta dhalaalida sare, adkaanta sare, iska caabbinta dharka ee sare iyo iska caabbinta daxalka. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay firfircooni kiimiko ah mana sahlana in biraha lagu xiro. Maaddaama ay tahay daahan adag oo ilaalin ah, waxaa la filayaa inay la kulanto shuruudahaan khaaska ah ee ka shaqeynaya qashinka. Waraaqdani waxay inta badan ku saleysan tahay gudaha iyo dibedda CRB_ Horumarka cilmi-baarista iyo isbeddelka horumarka ee daahan adag ayaa diiradda lagu saaray dhigaalka CRB ee teknolojiyada PVD ee isku dhafan_ Diyaarinta, qaab-dhismeedka iyo sifooyinka daahan ayaa la darsay. Natiijooyinka waxay leeyihiin muhiimad cilmiyeed muhiim ah iyo qiimeyn dalab. Marka hore, CRB waxaa lagu shubay awood sare oo magnetron sputtering (hipims) _
Isku-dhafka, qaab-dhismeedka wejiga iyo astaamaha farsamada ee daahan ayaa lagu gartaa.
Kala-duwanaanta iyo dabeecadda labbiska ee daahan aagagga tijaabooyinka kala duwan (khilaaf qallalan, biyaha la sifeeyey iyo biyaha badda) ayaa la darsay. Natiijooyinka waxay muujinayaan: CRB_ Dahaadhku wuxuu muujinayaa (101) hanuuninta la doorbiday, qaab dhismeedka wejiga ugu weyna waa CRB_ Qiyaasta atomiga ee B / Cr waa 1.76, adkaanta iyo qaabka laastikada waa 26.9 ± 1.0 GPA iyo 306.7 ± 6.0 GPA, siday u kala horreeyaan. Coefficients-ka isku-dhafka ah ee dahaadhka ee isku dhaca qalalan, biyaha la sifeeyey iyo biyaha badda waa 0.75, 0.26 iyo 0.22, siday u kala horreeyaan. Isku dheelitirka khilaafaadka ee dahaarka biyaha wasakhaysan iyo deegaanka biyaha badda ayaa si weyn hoos loogu dhigay sababo la xiriira xadka xaddiga biyaha la soo saaray iyo biyaha badda. Qalabaynta iyo xirashada qalabka wax lagu duubo ee isku dhaca qallalan iyo deegaanka biyaha qulqulaya ayaa ah mid xiranaya, halka deegaanka biyaha dhexdiisa, isku dheelitirka khilaafku ee dahaadhku uu hoos u dhacayo si cad, Waa saamaynta isku dhafka ah ee xirashada duugga ah iyo xirashada xoqan.
Marka labaad, marka la barbardhigo misigta, CRB waxaa laga helaa tuubada magnetron DC iyadoo la hagaajinayo bartilmaameedka fogaanta bartilmaameedka_ Qiyaasta atomiga ee B / Cr waxay ku kala duwan yihiin 1.9 ilaa 2.0 iyadoo la beddelayo heerkulka dhigaalka. Natiijooyinka XPS waxay muujinayaan in dahaadhku wali ka kooban yahay CRB_ Natiijooyinka waxay muujinayaan in qallooca dahaadhku yar yahay oo RQ u dhexeeya
1.11 nm iyo 1.95 nm. Kordhinta heerkulka dhigaalka, awoodda faafitaanka ee atamyada xayeysiinta ah ee dusha sare ee substrate ayaa la xoojiyaa, iyo xaddiga murugada ee daaha ayaa si tartiib tartiib ah u kordha, iyo qaabdhismeedka crystal wuxuu ka beddelaa jihada isku dhafan ee (101) iyo (001) illaa (001) hanuuninta la doorbiday; qaabdhismeedka iskutallaabta ee daaha ayaa ka beddelaya qaabdhismeedka jilicsan ee jilicsan illaa qaab dhismeedka khafiifka ah (qiyaastii 50 nm dhexroor),
Ugu dambeyntiina, waxaa loo beddelay qaab dhismeed adag oo nano ah (qiyaastii 4 ~ 7 nm dhexroor).
Kordhinta heerkulka dhigaalka, sifooyinka farsamooyinka ee daahan ayaa si muuqata loo hagaajiyay. Marka heerkulka dhigaalka uu ka sareeyo 300 ℃, superhard CRB oo adag oo ka weyn 40 GPA waa la heli karaa_ Marka heerkulka dhigaalka uu yahay 400 400, adkaanshaha dahaadhku wuxuu gaarsiisanyahay 50.7 ± 2 GPa. Isbeddelka microstructure iyo guryaha farsamooyinka leh heerkulka dhigaalka waxaa loo aaneynayaa (001) hanuuninta la doorbiday iyo cufnaanta microstructure sababo la xiriira faafitaanka sii kordhaya ee atomyada dhigaalka. Ugu dambeyntiina, CRB-yada leh (101) iyo (001) jihooyinka la doorbiday ayaa sidoo kale la darsay_ Degganaanta kuleylka ee lakabka ayaa la tijaabiyay, iyo CRB substrate iyo CRB heerkulka kala duwan ee dhigaalka ayaa la tijaabiyey_ Waxyaabaha aasaasiga ah ee korantada ee 2 daahan ee 3.5 wt.%
Xalka NaCl ayaa la baaray. Natiijooyinka waxay muujinayaan: (101) jihaynta la doorbiday ee CRB_ Marxalad cusub ayaa laga sameeyay 1000 ℃, iyo (001) jihaynta la doorbiday ee CRB_ Natiijooyinka waxay muujinayaan in daaha CRB ee (101) u janjeedha uu muujiyo xasiloonida heerkulka sare ee sare sababtoo ah ( 101) Jihaynta la doorbiday ee CRB_Natiijooyinka waxay muujinayaan in dahaadhka CRB uu leeyahay tamar dusha sare ah iyo tamarta dhalanrog hawo ka sarraysa CRB_ Awoodda wasakhda ee dahaadhka CRb-2 way ka sarraysay tan carbide-ka sibidhka ah, laakiin cufnaanta daxalka ee hadda ayaa hoos u dhacday ku dhowaad laba amar oo ah magnitude_ 2 daahan si wax ku ool ah u ilaalin karaa carbide sibidhka.
Hore: Titanium Boride Powder, TiB2
Xiga: Biraha Birta, FeB
Budada loo yaqaan 'Chromium boride'
Warshadaha budada Chromium boride
Warshadda budada loo yaqaan 'Chromium boride bor'
Soo saaraha budada Chromium boride
Soosaarayaasha budada budada ah ee Chromium
Chromium boride budada Qiimaha